09.03.20 Morning Nepali Murli Om Shanti BapDada Madhuban
“ मीठे बच्चे– तिमीलाई नशा हुनुपर्छ– हाम्रा पारलौकिक पिताले विश्वको आश्चर्य अर्थात् स्वर्ग बनाउनु हुन्छ , जसको मालिक हामी बन्छौं।”
बाबाको सङ्गबाट तिमीलाई के-के प्राप्तिहरू हुन्छन्?
बाबाको सङ्गबाट हामी मुक्ति, जीवन-मुक्तिका अधिकारी बन्छौं। बाबाको सङ्गले तारिदिन्छ। बाबाले हामीलाई आफ्नो बनाएर आस्तिक र त्रिकालदर्शी बनाउनु हुन्छ। हामीले रचयिता र रचनाको आदि-मध्य-अन्त्यलाई जानेका छौं।
धीरज धर मनुआ.....
यो कसले भन्नुहुन्छ? बच्चाहरूलाई पिताले नै भन्नुहुन्छ, सबै बच्चाहरूलाई भन्नुहुन्छ किनकि सबै दु:खी छन्, अधैर्य छन्। बाबालाई याद गर्छन्– दु:खबाट मुक्त गर्नुहोस्, सुखको मार्ग बताउनुहोस्। तर मनुष्यहरूलाई, त्यसमा पनि खास यहाँकालाई यो याद छैन– हामी धेरै सुखी थियौं। भारतवर्ष अति प्राचीन अद्भुत भूमि थियो। विश्वको आश्चर्य भन्छन् नि। यहाँ मायाको राज्यमा ७ आश्चर्यको गायन गर्छन्। ती हुन् स्थूल आश्चर्य। बाबाले सम्झाउनु हुन्छ– यी मायाका आश्चर्य हुन्, जसमा दु:ख छ। राम, बाबाको आश्चर्य हो स्वर्ग। त्यही विश्वको आश्चर्य हो। भारतवर्ष स्वर्ग थियो, हीरा जस्तो थियो। त्यहाँ देवताहरूको राज्य थियो। यो कुरा सबै बिर्सिएका छन्। हुन त देवताहरूको अगाडि शिर झुकाउँछन्, पूजा गर्छन् तर जसको पूजा गर्छन्, उनीहरूको जीवनीलाई जान्नुपर्छ। यो कुरा बेहदका बाबाले बसेर सम्झाउनु हुन्छ, यहाँ तिमी आएका छौ पारलौकिक बाबाको पास। पारलौकिक बाबा हुनुहुन्छ– स्वर्ग स्थापना गर्नेवाला। यो कार्य कुनै मनुष्यले गर्न सक्दैन। यिनलाई पनि बाबा भन्नुहुन्छ– हे कृष्णको पुरानो, तमोप्रधान आत्मा! तिमीले आफ्नो जन्मलाई जान्दैनौ। तिमी कृष्ण थियौ तब सतोप्रधान थियौ फेरि ८४ जन्म लिँदै लिँदै अहिले तिमी तमोप्रधान बनेका छौ, तिम्रा भिन्न-भिन्न नाम राखिएको छ। अहिले तिम्रो नाम ब्रह्मा राखिएको छ। ब्रह्मा नै विष्णु वा श्रीकृष्ण बन्छन्। कुरा एउटै हो– ब्रह्मा नै विष्णु, विष्णु नै ब्रह्मा। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण नै फेरि देवता बन्छन्। फेरि तिनै देवी-देवता शूद्र बन्छन्। अहिले तिमी ब्राह्मण बनेका छौ। अहिले बाबा बसेर तिमी बच्चाहरूलाई सम्झाउनु हुन्छ, यो भगवानुवाच हो। तिमी विद्यार्थी हौ। त्यसैले तिमीलाई कति खुशी हुनुपर्छ। तर त्यति खुशी रहँदैन। धनवानहरू धनको नशामा धेरै खुशी रहन्छन् नि। यहाँ भगवानका बच्चा बनेका छन् तैपनि त्यत्ति खुशीमा रहँदैनन्। बुझ्दैनन्, पत्थरबुद्धि छन् नि। तकदिरमा छैन भने ज्ञानको धारणा गर्न सक्दैनन्। अब तिमीलाई बाबाले मन्दिर लायक बनाइरहनु भएको छ। तर मायाको सङ्ग पनि कम छैन। गायन गरिएको छ– सङ्गले तार्छ, कुसङ्गले डुबाउँछ। बाबाको सङ्गले तिमीलाई मुक्ति-जीवनमुक्तिमा लैजानुहुन्छ तर रावणको सङ्गले तिमीलाई दुर्गतिमा लैजान्छ। ५ विकारको सङ्ग हुन्छ नि। भक्तिमा नाम भन्छन् सत्सङ्ग तर सीँढी त तल उत्रिइरहन्छन्, सिढींमा कसैलाई धक्का लाग्यो भने अवश्य पनि तलै गिर्छ नि! सबैका सद्गति दाता एक बाबा मात्रै हुनुहुन्छ। जो भए पनि भगवानलाई माथि तिरै हुनुहुन्छ भनी देखाउँछन्। तर बाबा बिना बच्चाहरूलाई परिचय कसले दिन्छ? बाबाले नै आफ्ना बच्चाहरूलाई आफ्नो परिचय दिनुहुन्छ। उनीहरूलाई आफ्नो बनाएर सृष्टिको आदि, मध्य, अन्त्यको ज्ञान दिनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ– म आएर तिमीलाई आस्तिक पनि बनाउँछु, त्रिकालदर्शी पनि बनाउँछु। यो नाटक (ड्रामा) हो, यो कुरा साधु-सन्त आदिले जानेका छैनन्। ती हुन्छन् हदका नाटक, यो हो बेहदको। यो बेहदको नाटकमा हामीले सुख पनि धेरै देख्छौं अनि दु:ख पनि धेरै देख्छौं। यस नाटकका कृष्ण र क्रिश्चियनको पनि कस्तो हिसाब-किताब छ। उनीहरूले भारतलाई लडाएर राज्य लिए। अहिले तिमी लड्दैनौ। उनीहरू आपसमा लड्छन्, राजाई तिमीलाई मिल्छ। यो ड्रामामा निश्चित छ। यी कुरा कसैले पनि जानेका छैनन्। ज्ञान दिने ज्ञानका सागर एक मात्र बाबा हुनुहुन्छ, जसले सबैलाई सद्गति गर्नुहुन्छ। भारतवर्षमा देवी-देवताहरूको राज्य थियो, त्यतिबेला सद्गति थियो। अरू सबै आत्माहरू मुक्तिधाममा थिए। भारत सुनको थियो। तिमीले नै राज्य गर्थ्यौ। सत्ययुगमा सूर्यवंशी राज्य थियो। अहिले तिमीले सत्यनारायणको कथा सुन्छौ। नरबाट नारायण बन्ने कथा हो। यो पनि ठूला अक्षरमा लेखिदेऊ– सच्चा गीताबाट भारतवर्ष सत्यखण्ड, सम्पन्न (वर्थ पाउण्ड) बन्छ। बाबा आएर सच्चा गीता सुनाउनु हुन्छ। सहज राजयोग सिकाएपछि सम्पन्न बन्छन्। बाबाले कहानी त धेरै सम्झाउनु हुन्छ, तर बच्चाहरूले देह-अभिमानको कारण बिर्सिन्छन्। देही-अभिमानी बनेमा धारणा पनि हुन्छ। देह-अभिमान भएमा धारणा हुँदैन।
बाबाले सम्झाउनु हुन्छ– मैले आफूलाई सर्वव्यापी छु कहाँ भन्छु र। मलाई भन्छन् पनि, हजुर माता-पिता... यसको अर्थ के हो? हजुरको कृपाबाट अथाह सुख। अहिले त धेरै दु:ख छ। यो गायन कुन समयको हो– यो पनि बुझ्दैनन्। जसरी पक्षीहरू चूँ-चूँ गरिरहन्छन्, अर्थ केही पनि हुँदैन। त्यस्तै यी पनि चूँ-चूँ गरिरहन्छन्, अर्थ केही पनि हुँदैन। बाबा बसेर सम्झाउनु हुन्छ, यो सबै हो असत्य (अनराइटियस)। कसले असत्य बनायो? रावणले। भारत सत्यखण्ड थियो त्यतिबेला सबैले सत्य बोल्थे, चोरी ठगी आदि केही पनि हुँदैनथ्यो। यहाँ कति चोरी आदि गर्छन्। दुनियाँमा त ठगी नै ठगी छ। यसलाई भनिन्छ नै– पापको दुनियाँ, दु:खको दुनियाँ। सत्ययुगलाई भनिन्छ सुखको दुनियाँ। यो हो विकारी, वेश्यालय, सत्ययुग हो शिवालय। बाबा बसेर कति राम्ररी सम्झाउनु हुन्छ। नाम पनि कति राम्रो छ– ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व-विद्यालय। अहिले बाबा आएर समझदार बनाउनु हुन्छ। भन्नुहुन्छ– यी विकारहरूलाई जित्यौ भने तिमी जगतजित बन्छौ। यो काम नै महाशत्रु हो। बच्चाहरूले बोलाउँछन् पनि त्यसैले, ताकि हामीलाई देवी-देवता (गड-गडेज) बनाउनुहोस्।
बाबाको यथार्थ महिमा तिमी बच्चाहरूले मात्र जानेका छौ। मनुष्य त न बाबालाई जानेका छन्, न बाबाको महिमालाई जानेका छन्। तिमीले जानेका छौ– उहाँ प्यारका सागर हुनुहुन्छ। बाबाले तिमीलाई यति ज्ञान सुनाउनु हुन्छ, यही उहाँको प्यार हो। शिक्षकले विद्यार्थीलाई पढाएपछि विद्यार्थी केबाट के बन्छन्। तिमी बच्चाहरू पनि बाबा जस्तै प्यारको सागर बन्नु छ, जसलाई पनि प्यारले सम्झाउनु छ। बाबा भन्नुहुन्छ– तिमीले पनि एक अर्कालाई प्यार गर। पहिलो नम्बरको प्यार हो– बाबाको परिचय दिनु। तिमीले गुप्त दान गर्छौ। एक अर्कालाई घृणा पनि गर्नु हुँदैन। नत्र तिमीले डण्डा खानु पर्नेछ। कसैलाई तिरस्कार गरेमा डण्डा खानुपर्छ। कहिल्यै पनि कसैसँग घृणा नगर, तिरस्कार नगर। देह-अभिमानमा आउनाले नै पतित बनेका हौ। बाबाले देही-अभिमानी बनाएपछि पावन बन्छौ। सबैलाई यही सम्झाऊ– अब ८४ को चक्र पूरा भयो। जो सूर्यवंशी महाराजा-महारानी थिए, उनै फेरि ८४ जन्म लिएर उत्रिँदै-उत्रिँदै अहिले जमीनमा आइपुगेका छन्। अहिले बाबाले फेरि महाराजा-महारानी बनाइरहनु भएको छ। बाबाले केवल भन्नुहुन्छ– म एकलाई याद गर्यौ भने पावन बन्छौ। तिमी बच्चाहरूले दयावान बनेर सारा दिन सेवाको ख्याल चलाउनु पर्छ। बाबाले निर्देशन दिइरहनु हुन्छ– मीठे बच्चे, दयावान बनेर जो बिचरा दु:खी आत्माहरू छन् ती दु:खी आत्माहरूलाई सुखी बनाऊ। उनीहरूलाई छोटो पत्र लेख्नुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ– मलाई याद गर अनि वर्सालाई याद गर। एक शिवबाबाको महिमा हो। मनुष्यहरूलाई बाबाको महिमाको बारेमा पनि थाहा छैन। हिन्दीमा पनि चिट्ठी लेख्न सक्छौ। बच्चाहरूमा सेवा गर्ने पनि हौसला हुनु पर्छ। धेरै यस्ता पनि छन् जो आत्माघात गर्न पनि बस्छन्, उनीहरूलाई पनि तिमीले सम्झाउन सक्छौ– जीवघात महापाप हो। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई श्रीमत दिने शिवबाबा हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ, श्री श्री शिवबाबा। तिमीलाई श्री लक्ष्मी, श्री नारायण बनाउनु हुन्छ। श्री श्री त उहाँ एक मात्रै हुनुहुन्छ। उहाँ कहिल्यै चक्रमा आउनुहुन्न। बाँकी तिमीलाई श्री को टाइटल मिल्छ। आजकल त सबैलाई श्री को टाइटल दिइरहन्छन्। कहाँ ती निर्विकारी, कहाँ यी विकारी– रात दिनको फरक छ। बाबाले दिनहुँ सम्झाइरहनु हुन्छ– एक त देही-अभिमानी बन र अर्को सबैलाई सन्देश पुर्याऊ। तिमी पनि पैगम्बरका बच्चा हौ। सर्वका सद्गतिदाता एउटै बाबा हुनुहुन्छ। बाँकी धर्म स्थापकलाई कहाँ गुरु भनिन्छ र। सद्गति गर्ने एउटै हुनुहुन्छ। अच्छा!
१) कसैलाई पनि घृणा गर्नु छैन। दयालु बनेर दु:खी आत्माहरूलाई सुखी बनाउने सेवा गर्नु छ। बाबा समान मास्टर प्यारको सागर बन्नु छ।
२) “हामी भगवानका सन्तान हौं” यसै नशा र खुशीमा रहनु छ। कहिल्यै मायाको उल्टो सङ्गमा जानु छैन। देही-अभिमानी बनेर ज्ञानको धारणा गर्नु छ।
स्मृतिको स्विचद्वारा स्व कल्याण र सर्वको कल्याण गर्ने सिद्धि स्वरूप भव
स्थितिको आधार स्मृति हो। यो शक्तिशाली स्मृति रहोस्– म बाबाको र बाबा मेरो। यसै स्मृतिद्वारा स्वयंको स्थिति शक्तिशाली रहन्छ र अरूलाई पनि शक्तिशाली बनाउँछौ। जसरी स्विच अन गरेपछि प्रकाश हुन्छ, त्यसैगरी यो स्मृति पनि एक स्विच है। सदा स्मृतिरूपी स्विचको अटेन्शन रहोस् अनि स्वयंको र सर्वको कल्याण गरिरहन्छौ। नयाँ जन्म भएको छ त्यसैले नयाँ स्मृति होस्। पुरानो सबै स्मृतिहरू समाप्त– यसै विधिबाट सिद्धि स्वरूपको वरदान मिल्छ।
अतीन्द्रिय सुखको अनुभूति गर्नको लागि आफ्नो शान्त स्वरूप स्थितिमा स्थित रहने गर।
१ ) ज्ञानी आत्माहरू को गल्तीबाट हुने १०० गुना दण्ड
यस अविनाशी ज्ञान यज्ञमा आएका साक्षात् परमात्माको हात समातेर फेरि कारण अकारण यदि उसबाट विकर्म हुन्छ भने उसलाई सजाय धेरै ठूलो हुन्छ। जस्तै ज्ञान लिँदा उसलाई १०० गुना फाइदा छ, त्यस्तै ज्ञान लिएर कुनै भूल हुन्छ भने फेरि १०० गुना दण्ड पनि मिल्छ। त्यसैले धेरै खबरदारी राख्नु पर्छ। भूल गरिरह्यौ भने कमजोर भइरहन्छौ। त्यसैले सानो-ठूलो भूललाई पक्रेर, अबका दिनमा परीक्षण गरेर बढ्दै जाऊ। हेर, जस्तै समझदार ठूलो मानिसले खराब काम गर्छ भने उसको लागि ठूलो सजाय मिल्छ र जो तल गिरेको मानिस छ उसले केही खराब काम गर्छ भने उसको लागि यति सजा हुँदैन। अहिले तिमी पनि परमात्माको बच्चा कहलाउँछौ त्यसैले यति नै तिमीले दैवीगुण धारण गर्नु छ, सच्चा बाबाको पासमा आएका छौ त्यसैले सच्चा भएर रहनु छ।
२ ) परमात्मा जानी-जाननहार कसरी हो ?
मानिसहरूले भन्छन् परमात्मा जानी-जाननहार हुनुहुन्छ, अब जानी-जाननहारको अर्थ यो होइन कि सबैको दिललाई जान्नुहुन्छ। तर सृष्टि रचनाको आदि-मध्य-अन्त्यलाई जान्नेवाला हुनुहुन्छ। परमात्मा रचयिता, पालन कर्ता र संहार कर्ता हुनुहुन्छ, यसको मतलब यो होइन कि परमात्माले पैदा गर्नुहुन्छ, खुवाउनु हुन्छ र मार्नुहुन्छ। मनुष्य आफ्नो कर्मको हिसाब-किताबले जन्म लिन्छन्, यसको मतलब यो होइन– परमात्मा बसेर कसैको नराम्रो संकल्प र राम्रो संकल्पलाई जान्नुहुन्छ। त्यो त जान्नुहुन्छ– अज्ञानीहरूको दिलमा के छ। सारा दिन मायावी संकल्प चलिरहन्छ र ज्ञानीको मनमा पनि संकल्प चल्छन्, बाँकी एक एक संकल्पलाई बसेर कहाँ रीड गर्ने र? बाँकी परमात्माले जान्नुहुन्छ, अहिले त सबैको आत्मा दुर्गतिमा पुगेको छ, उनीहरूको सद्गति कसरी हुनु छ, यो सारा परिचय जानी-जाननहारलाई छ। अहिले मनुष्य जो कर्म भ्रष्ट बनेका छन्, उनीहरूलाई श्रेष्ठ कर्म गर्न सिकाउनु र उनलाई कर्मबन्धनबाट छुट्कारा दिनु, यो परमात्माले जान्नुहुन्छ। परमात्माले भन्नुहुन्छ– म रचयिता र मेरो रचनाको आदि-मध्य-अन्त्यको यो सारा ज्ञानलाई म जान्दछु, त्यो परिचय त तिमी बच्चाहरूलाई दिइरहेको छु। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई उहाँ बाबाको निरन्तर यादमा रहनु छ तब नै सर्व पापहरूबाट मुक्त हुन्छौ अर्थात् अमरलोकमा जान्छौ, वास्तवमा यस जान्नुलाई नै जानी-जाननहार भनिन्छ। अच्छा! ओम् शान्ति।